टुर्नामेन्ट डाइरेक्टरसँगको कुराकानी - खेलकुद - साप्ताहिक
टुर्नामेन्ट डाइरेक्टरसँगको कुराकानी
एएफसी यू–२३ च्याम्पिनसिप छनौट खेलेको नेपाली टिमका प्रमुख थिए, सञ्जीव मिश्र । उनी टिमसँगै युएई गएका थिए । उनले प्रत्यक्ष खेल पनि हेरे । के कस्ता कमजोरी देखिए त ? अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर मिश्रसँग यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको पाँच प्रश्न :
के नेपाल सम्मिलित समूह वास्तवमै कठिन थियो ?
यो समूह कठिन भएकोमा कुनै शंका छैन । युएई र उज्वेकिस्तान निकै बलिया टिम हुन् ।
के नेपाली टिमले वास्तवमै खराब खेलेको हो ?
मेरो विचारमा नेपाली टिमले निकै कमजोर खेलेको होइन, तर हाम्रा खेलाडीले आफ्नो योग्यताअनुरूप प्रदर्शन गर्न सकेनन् । त्यसैले नतिजा खराब देखियो ।
हाम्रो तयारी पनि पर्याप्त थिएन हैन ?
पक्कै पनि हाम्रो तयारी पर्याप्त रहेन । हामीले तयारीका लागि धेरै समय दिन सकेनौं । उत्तिकै ठूलो समस्याका रूपमा हाम्रा खेलाडीमा अनुभवको कमी पनि देखियो ।
यू–२३ फुटबलका लागि हामीलाई अलग कार्यक्रमको आवश्यक छ ?
छ, यू–२३ फुटबलका लागि हामीले अलग्गै कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुपर्छ । हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने यू–२३ टिम भनेको राष्ट्रिय टिमको दोस्रो भाग हो, यसलाई रिजर्भ नेसनल टिम पनि भन्न सकिन्छ ।
अब एन्फाले भविष्यमा के गर्नुपर्छ ?
फुटबलमा लिगको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ । अहिले हामी त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । लिग भएपछि मात्र हामीसँग राम्रा युवा खेलाडी छनौट गर्ने राम्रो अवसर र विकल्प हुन्छ ।
व्यक्तित्व विकासका लागि
आठ वर्षसम्म छोरा थिएँ, त्यसपछि छोरी भएँ